Zonke amakati ngaphandle kokukhetha ukhotha uboya, futhi bakwenza hhayi ngoba ahlanzekile kakhulu, futhi ngenxa isifiso nekama izinwele zakho, susa undercoat engadingeki futhi ukubabulala iphunga. Lezo kungabangela iziyaluyalu wokugaya ukudla, njengoba kukhona amathuba eqinile ukuthi izinwele ngqo esiswini. Uma esiswini lilondolozwe uvolo ke isilwane sakho ubuka uyoxosha isicanucanu. Ethusayo inqubo wokugaya ukudla, izigaxa uvolo kungabangela ukuqunjelwa. Kulokhu, ngoba amakati uwoyela amaminerali kuyinto ikhambi elihle kakhulu.
Ithumbu A enempilo cat uthululwa kuze kube izikhathi 2 ngosuku. Ngakho-ke, lo mkhuba ukuqunjelwa, umninikhaya kungacacisa ukuthi ngaphandle kobudisi. Esikhathini ikholoni nge esimweni esingajabulisi enjalo ithola sezinyawo, uhlala ngaphakathi futhi hhayi ngepayipi ngaphandle, ngaleyo ndlela ushevu isilwane. Futhi lokhu kuhilelani ukuhlukumeza zempilo isibindi, izinso, kwawukhandla inhliziyo futhi kubangela izinkinga izinwele kanye isikhumba. Ukuze hhayi ukuletha izinkinga ezinjalo, uwoyela Vaseline for namakati isetshenziswa ulwe ukuqunjelwa. Lesi sidakamizwa kunomphumela oqinile laxative, ke Athambisa hhayi ugxile odongeni emathunjini, kanjalo ukuthambisa kwesihlalo futhi excreted.
Kanjani ukunikeza uwoyela ikati Vaseline
Umthamo ukubala okungcono wezilwane, njengoba ayikwazi ukucaciswa ngokuqondile ngoba endabeni ethile isidingo imithi kanye nenani okuhambelana amakati isisindo. Kodwa ungakwazi ukubhekana naso bebodwa, uma kunesidingo. Cats enesisindo cishe 5 kg kufanele inikwe ibhotela cubes 4-5. Uma umthamo umnikazi kuphakamisa ukukhathazeka ngoba impilo isilwane abathandekayo bakho, ungaqala ukunikeza amafutha esincane, uma lokhu kudingekile ukuze bagcine Imiphumela ngokucophelela. Ongahluziwe jelly for namakati ukulimala ethile ngeke nilingenise, njengasezulwini odongeni emathunjini akuyona amuncwa umzimba, njengoba kushiwo ngenhla, futhi kunomphumela wendawo kuphela.
Ukunika uwoyela kufanele kube ekuseni. Kwenze engcono esiswini esingenalutho, njengoba kusukela kule nqubo ngemva kokudla isilwane sakho kungenzeka uhlanze. uwoyela Isikali ekutheni yimalini isilwane sakho ukala.
upharafini Liquid: nokusebenzisa for namakati
Amafutha uthayiphe isipetu ngaphandle inaliti ngokucophelela uthele emlonyeni cat. Kubalulekile ukwenza lokhu ngendlela akunjalo hit olimini. Umuthi engcono uthele kancane eya ohlangothini, ukuze wawugelezela ngqo emphinjeni. Lapho inqubo the cat akufanele ngabe yikuphi amanga. Uma isilwane sakho kusihlwa e ethoyilethi akezi, khona-ke kumelwe futhi ukunikeza upharafini liquid. Ukuze amakati ngokuvamile ngisho ne ukuqunjelwa Lukhulu kangakanani ngemithamo ngokwanele double. Uma, ngemva kwalokhu kwenzeka movement wamathumbu, bese aphinde usuphinda ngosuku olulandelayo.
Uma ikati likwazi ukuqunjelwa ezinzima, ithuluzi ke inganikelwa nge enema. Ngo ekhemisi wezilwane noma avamile ukuthenga klizmochku encane kunazo zonke futhi ulisebenzise ukuze le nqubo.
Goose Kholmogory: incazelo zohlobo nokuqukethwe
Onogwaja yokuzalanisa imigodi
Kungani ubuhlungu izinso
Indlela yokulungisa imiqulu yemifino ngendlela efanele
Imithetho for ukuthutha kwezimpahla eziyingozi kufanele ukulandela ngokucophelela
Delicious Sandwich: Ungadliwa. sandwich Festive: zokupheka ngezithombe
"Lavrov indlela": nabalingisi yochungechunge
MANPADS "Strela": Ukucaciswa (ifotho)
Nature of China kanye nezici zayo
Pulse edluliselwe: isimiso ukusebenza kanye nezinhlobonhlobo main
Izimfuneko izifushaniso ku GOST
Amakhambi Folk izinwele oluqinisayo